Amboary tsikelikely ny programa ampiasainao amin'ny fampiasana Shell Scripting - Fizarana 3 | Avy amin'ny Linux
Tamin'ny fidirana teo aloha amin'ity andiam-panontana ity dia nampatsiahy izahay ny fomba fampiharana a:
Modely fanamarinana ROOT SUPERUSER ROOT
MODULE VARIABLES TONTOLO IZAO
Ary tamin'ny teo aloha, ny fomba fampiharana a Shebang sy BSM (Mode Bash Strict / Strict Bash Mode).
0.1 Fomba fanao tsara indrindra hamoronana Shell Script amin'ny GNU / Linux - Fizarana 1
0.2 Fomba fanao tsara indrindra hamoronana Shell Script amin'ny GNU / Linux - Fizarana 2
1 NY EDITOR VI
Fomba fanao tsara indrindra hamoronana Shell Script amin'ny GNU / Linux - Fizarana 1
Ity misy ohatra a Modely fanatanterahana indroa na fanamelohana tsy nahomby, maka ohatra ny iray amin'ny ahy programa (fampiharana) zava-misy ao a Shell script antsoina hoe Linux Post Install - Script bicentennial 8.0:
Ity no tokony ho modely (fizarana) Mba hanamarinana fa ny script dia tsy mandeha ankehitriny ary noho izany dia manakana azy tsy hovonoina in-2, na ny tsy fahombiazany tamin'ny fotoana nandefasana azy dia nifarana tamim-pahombiazana. Izaho manokana dia manampy ireto andalana manaraka ireto hamoronana ity modely ity:
NY EDITOR VI
Tsapako fa maro ho an'ny fampiasana mora kokoa, raha ny amin'ny amboary ny scripto amin'ny alàlan'ny terminal tsy maintsy mampiasa ny nano tonian-dahatsoratra izay tsy mora ampiasaina fotsiny fa manana safidy matetika mahazatra indrindra hanatanterahana ireo dingana fanovana ilaina amin'ny rakitra an-tsoratra tsotra, toy ny Shell script, na izany aza, ny tolo-kevitro tsara indrindra amin'ity raharaha ity dia ny hianarany sy hampiasa ilay Mpanonta vi, izay tsy mandroso fotsiny, na dia feno aza, fa rehefa voafehiny dia hanome ny fomba ilaina hanaovana fanovana na fandidiana amin'ny rakitra amin'ny fomba mahomby sy mahomby kokoa.
Amin'ny teny hafa, Vi na Vim dia mpamoaka lahatsoratra tena ilaina, izay manome fahafaha-manao be rehefa manova script, manova rakitra an-tsoratra, amin'ireo karazana rakitra maro hafa, fa ambonin'izany rehetra izany, rehefa mandahatra. Raha ny fahitako azy dia iray amin'ireo tonian-dahatsoratra tsara indrindra misy izy, na izany aza, toy ny mahazatra, rehefa manomboka mampiasa azy ireo ny mpampiasa nano ary mahita fomba hafa hampiasana azy, dia matetika no mitranga izany «na tiany izany na ankahalainy. izao ". Heveriko fa ilaina ny mianatra mampiasa azy!
Azo antoka fa amin'ny fidirana voalohany dia toa toa izany tonian-dahatsoratra tsy namana ary miaraka a tena sarotra ianarana mianatra, saingy naharesy indray mandeha, tamin'ny fampiasana ireo asany fototra, mitombo amin'ny fomba miavaka tokoa ny famokarana.
Marina ihany koa fa, Mpanonta vi manana na miasa miaraka Hitsin-dàlana sarotra ary tsy manana menus na bokotra. Vita amin'ny alàlan'ny baiko sy hitsin-dàlana izay filaharan'ny litera sy famantarana. Ary mahasosotra tokoa izany ho an'ireo mpampiasa maro izay manadino na tsy mahatadidy mora, na izany aza, kely fotsiny ny toerana misy azy ao anaty disk ary misy amin'ny ankamaroan'ny Linux na Unix misy azy io. Ary satria fandaharana mandeha amin'ny tontolon'ny lahatsoratra izy io dia ilaina amin'ny fidirana lavitra sy fanovana amin'ny alàlan'ny terminal. Noho izany, hanararaotra ity lahatsoratra fohy ity izahay hanomezana famerenana fohy ny fampiasana fototra avy amin'ny rangotra, mba hialana amin'izany tahotra izany ary hahitana raha ilaina ny mianatra mampiasa azy.
Amin'ny fiantsoana ny Mpanonta vi hita eo amin'ny efijery modus fanovana. Amin'ity maody ity dia asongadino ny toeran'ny cursor, ary asio marika ny tsipika banga toetra ~ ary eo amin'ny faran'ny efijery dia misy ny tsipika, izay mampiseho ny anaran'ny fisie sy ny isan'ny litera ao anatiny. Raha ny Mpanonta vi mandalo ny làlana sy ny anaran'ny rakitra toy ny masontsivana eo noho eo, dia hiseho ny atiny. Rehefa mihazakazaka miaraka amin'ny anaran'ny rakitra tsy misy io mpanonta io dia noforonina ho azy.
El Mpanonta vi manana fomba fiasa roa:
Hanova fomba: Hanampiana lahatsoratra amin'ny rakitra.
Ny Mode Command: Mampiditra kaody manao asa manokana.
Rehefa manohy manova rakitra an-tsoratra miaraka amin'ny Mpanonta vi, ny fanovana dia tsy atao mivantana eo amboniny. Fa raha ny tena izy dia mihatra amina kopian'izy ireo izy ireo Mpanonta vi mamorona amin'ny toerana fahatsiarovana vonjimaika antsoina buffer. Ny rakitra tena izy dia novaina ihany rehefa voasoratra ny atin'ny buffer. Manana tombony sy fatiantoka izany. Amin'ny lafiny iray, midika izany fa afaka miala amin'ny fanovana rakitra ianao ary manipy ny fanovana rehetra natao nandritra ny fotoam-pivoriana iray, ary namela ny kopian'ny kapila. Etsy ankilany, ny very atiny tsy voarakitra ao amin'ny buffer momba ny asa dia mety ho very raha nianjera ny rafitra. Ny tsara indrindra dia ny mitahiry ny asanao matetika, indrindra rehefa manao fanovana lehibe. Raha tehirizina ny rakitra dia novaina nefa tsy mivoaka ny Mpanonta vi, tsindrio fotsiny ny baiko amin'ny maody baiko :w
Famaranana ny fanatanterahana ny Mpanonta vi fomba isan-karazany azo ampiasaina, ao anaty foana maody baiko:
: q -> Akatona ny tonian-dahatsoratra raha tsy misy fanovana natao amin'ilay rakitra.
: q! -> Akatona ny tonian-dahatsoratra manary ny fanovana ao anaty rakitra.
: wq -> Akatona ny tonian-dahatsoratra mitahiry ireo fanovana ao anaty rakitra.
ZAVA-DEHIBE: Tokony hialanao ny fanovana an'io rakitra io miaraka amina seho maromaro ao amin'ny Mpanonta vi sokafy amin'ny fotoana iray, satria tsy misy fomba azo antoka na inona na inona ny kopia farany izay horaiketina anaty disk.
Ao amin'ny Mode Edit: Rehefa Mpanonta vi, manomboka foana ao amin'ny maody baiko, ka alohan'ny azonao atao manampy, manova na mamafa ny lahatsoratra ao anaty fisie tsy maintsy manoratra ny iray amin'ireo baiko fampidirana ny Mpanonta vitoy "I" (atsofohy), mba hampidirana lahatsoratra amin'ny toeran'ny cursor ankehitriny, na "A" (ampiana) hampiditra lahatsoratra aorian'ny toeran'ny kursor ankehitriny. Hiverina any maody baiko, tsindrio fotsiny ny lakile "Esc". Raha ao a fotoana X tsy fantatrao izay maody iasanao, amin'ny alàlan'ny fanindriana fotsiny ny lakile "Esc" ny iray dia mahazo antoka fa miditra izy maody baiko, ary afaka miverina manohy ny asa ianao.
Ao amin'ny Mode Command: Rehefa manokatra rakitra miaraka amin'ny Mpanonta vi, misokatra avy hatrany ao amin'ny maody baiko. Ary amin'ity maody ity dia azonao atao manatanteraka hetsika (baiko) iza no manatanteraka a asa maro isan-karazany. Maro amin'ireny ny baiko dia misy litera iray na roa ary isa tsy voatery mifandraika amin'ny lahasa samihafa. Betsaka ny baiko tsy mila fanindriana ny lakile Miverena ka novonoina ho faty izy ireo, fa ny baiko rehetra atomboka amin'ny tsanganana iray (:) mitaky fanindriana ny lakile Miverena hihazakazaka izy ireo.
DIDIANA INDRINDRA NY EDITOR VI
Ny baiko lehibe an'ny Mpanonta vi, arakaraka ny mahasoa azy ireo rehefa manitsy antontan-taratasy dia:
01.- Mifindra ao anaty fisie
02.- Manampy lahatsoratra
03.- Hanova lahatsoratra
04.- Esory ny fanovana
05.- Delete ny lahatsoratra
06.- Mifindra ary / na mandika lahatsoratra
07.- Manatanteraka baiko amin'ny maody EX
08.- Fikarohana sy fanoloana
09.- Dumping ny atiny avy amin'ny rakitra iray mankany amin'ny iray hafa
10.- Fanovana rakitra miaraka
ZAVA-DEHIBE: Ny didin'ny Mpanonta vi izy ireo dia afaka alohan'ny counter izay manondro hoe impiry no tokony averina ny fandidiana. Ohatra 3dd hamafa tsipika 3, 2dw mamafa teny 2, ary 4x mamafa ny endri-tsoratra 4. Ny counter dia azo ampiasaina amin'ny baiko handehanana manodidina ny efijery, ohatra 3w o 2Ctrl-F Fanindriana a "." miverina ny fandidiana farany natao. Ohatra, raha voafafa ny tsipika iray ary ny hetsika manaraka dia ny mamafa ny tsipika iray, tsindrio fotsiny ".".
Nota: Betsaka ny didin'ny Mpanonta vi ny manaja sorabaventy sy soramadinikaRaha atao teny hafa, ny baiko mitovy amin'ilay soratana amin'ny sora-baventy na kely dia mety hisy vokany hafa tanteraka.
Na eo aza izany, raha mila fampahalalana bebe kokoa dia afaka mitady Internet ianao (Google na Youtube) fampahalalana mifandraika amin'ny Editor vi, izay betsaka sy be dia be amin'ny literatiora sy ny fanohanana.
Na izany aza, avelako ho anao ity SARY FITSIPIKA (SARY FITSIPIKA) tena ilaina tokoa izany hanombohana ny Mpanonta vi
Aorian'izay, amin'ny lahatsoratra ho avy dia hanohy hahita ohatra iray isika modules (fizarana) izay manao asa toy ny:
MODULE AUTHORISATION an'ny mpampiasa miaraka amin'i PASSWORD
MODULE FAHAMARINANA NY ARCHITECTURE an'ny SYSTEM OPERATING
MODEFAN'NY FITONDRANA NY Fiteny
MODULE FANORENANA PROXY HO AN'NY TONTOLO IAINANA EXECUTION
Anisan'ireo maro hafa!
Ary toy ny mahazatra dia manoro aho mandehana mianatra amin'ny fomba ampianarin-tena momba ny baiko: gksu, fifanakalozan-kevitra, gxmessage, zenity, espeak, lalao, ankoatry ny maro hafa mamorona interface interface amin'ny Terminal na ho an'ny Desktop an'ny mpampiasa, miaraka amin'ny fanairana sonika na multimedia, ary fahalalana mialoha izay hampiasain'izy ireo any aoriana.
Tadidio fa ireo sy ireo tolo-kevitra hafa momba ny sasany modely, asa, miovaova, baiko na hetsika amin'ny ankapobeny dia azo tanterahina izany fomba maro, ary izay aseho eto dia iray ihany fomba tsotra, ny fomba maro azo atao sy azo inoana izay hoy hetsika na azo tanterahina!
Mba hamaranana fotsiny dia avelako ianao, a Screencast nataoko, mba hampisehoana aminao izay mety ho vitanao, rehefa vita izany Shell Scripting fampianarana an-tserasera ao amin'ny DesdeLinux:
(LINUX POST INSTALL - BICENTENNIAL SCRIPT 8.0.0) - Fizarana 2
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » GNU / Linux » Amboary tsikelikely ny programa ampiasainao amin'ny fampiasana Shell Scripting - Fizarana 3